Burcadda internet-ka oo weerartay dhowr hey’adood oo dowladu leedahay | Somaliska
Hey’adaha dowladda ee u qaabilsan dhanka warbixinadda teknoloojiyadda ee ITga, ayaa maanta waxaa lugu qaaday weerar, taas oo keentay iney ay maanta adeegoodii xagga internet-ka ku yimaado hakad iyo culeys.
“Tani waa mid lugu gelinayo carqalado hanaanka iyo maamulka bulso, in taas dadka lugu sameeyna waa anagii aragnay markii uu socday banaanbixii kooxaha cunsuriyiinta” ayuu yiri Håkan Fransson, oo ah madax warbixined-ka teknoloojiyada (IT-ga) u qaabilsan gaadiidka galbeed ee Västtrafik. Sidaasi si lamid ah ayaa waxaa weerar dhanka IT-ga ah loo geeystay waaxdiidka oo iyaguna maanta shaaciyey in la bartilmaameedsaday.
“Waxaan kuu cadeeynayaa in wax walba yihiin weerar ah “d-dosattack”, Sidaas waxaa isna sheegay Mikael Andersson oo ah madaxa warfidinta ee Transportstyrelsen. Wuxuu sidoo kale cadeeyey in falkani wax carqaladeeynta ah ka biloowday bar internet-ka ah islamarkaasina aqoonin halka laga soo weeraray ugu dambeyntiina ku howlan yihiin siddii loo xalin lahaa luguna wargelin lahaa hey’adda MSB oo ah hey’adda dowladda ee u qaabilsan heeganka iyo badbaada bulshadda.
Dhinaca kale gobolka Göteborg ayaa maanta isna waxaa lugu qaaday weerar dhanka ITga ah kaas oo keenay in maanta hakad ku yimaado dhamaan adeegyaddii ku xirnaa bogga maamulka magaaladda oo ay ka mid tahay barta caanka ah Hjärntorget oo ah barnaamij isku xira adeegyo badan oo gobolka hoos yimaado.
Weeraradda noocaan ah ayaa waxaa inta badan sameeya shuftada internet-ka kuwaas oo caalamka meelo kala duwan ka jooga, waxeeynta inta badan adeegsadaan barnaamij faayrus ah oo ay ku naafeeynaa kombiyuuteradda caalamka. Mana ahan dhacdo maanta ku cusub waa mid dhacda inta badan.
Ugu dambeytiina maanta gelinkii dambe waxaa isna culeys badan ku yimid sida ay warbaahinta Iswiidhan sheegeeyso baraha bulshadda oo uu ka mid yahay baraha caanka ah ee facebook iyo instagram. Su,aasha taagan ayaa ah cidda ka dambeeysa.